Rega Spam Bots NaSemalt
Zvakakosha kudzivirira nzira yakaipa iyo iri kukudzivisa kusvika pawebsite yako uye kuratidza maonero asina kunaka mumaGoogle Analytics. Chokutanga pane zvose, iwe unofanirwa kunzwisisa kana chitoro chako chinouya kubva kuGoogle kana bots chinobatanidzwa. Kana ukaona kuwedzera kusingatarisirwi mumugwagwa, kune mikana yokuti haisi yakarurama sezvausina kuita SEO zvakanaka. MuGoogle Analytics, unofanirwa kushanyira nzvimbo dzeMigwagwa yeTraffic uye uone hutano hwemigwagwa pamwe neIndaneti. Mawebhu, maprobhoti kana anovandudza-auto: unogona kuzvitumidza chinhu asi haugoni kufuratira kuti software inoshandisa World Wide Web sevanhu chaivo. Zvinosuruvarisa, havakubatsiri mawebsite enyu uye vanongofanidza kuita sevanhu, vachikupai maonero akawanda. Kune rumwe rutivi, zvingave zvisingabviri kuti chero munhu atakure motokari dzakawanda kune zvake / webhusaiti yepamusoro nekuda kwemakwikwi makuru. Iwe unogona kugumisa kuedza kwako nekuita bhoti inogona kunyora nzvimbo yako mu tsvakurudzo yekutsvaga migumisiro. Google inongotarisa zvibatanidzwa uye mapeji anopa vashandisi mashoko echokwadi uye echokwadi. Kana iwe uine zvakawanda zvepamuviriya zvinotaridzika sevanhu chaivo, unofanira kutsvaga mhinduro mumisasa umo mabasa anorwa-spam anowanzokurukurwa. Uye kana iwe wakaneta nemabhoti asingaoneki, mabhodhi uye malware zvakagadzirirwa kupa peji maonero, kukanganisa kunokanganisa, pamwe pamwe nekubatana kwekubatanidza kuvhara, pasina kukubvumira iwe kuti uite mutungamiri chaiyo.
Ndinofara, zvinokwanisika kubvisa mabhoti uye spam nekuchengeta mupfungwa zvinhu zvishoma zvinokosha. Panyaya iyi, Max Bell, we Semalt Mutengi Wekugutsikana Kwevatendi, anokupa kuti uongorore mazano anotevera:
Unogona kunzwisisa dambudziko rebhoti chete kana uchitarisa zvimwe zvemienzaniso..Muenzaniso wokutanga ndewokuti kana iwe une Google bots, izvi zvinowanzogadzirirwa kukupa iwe-seji peji maonero. Iwe unogonawo kutambura kubva kuBob rakagadzirirwa kukumanikidza kuti uvandudze mapeji ako ewebhu. Vose vari vaviri vanoshanyira nzvimbo dzenyu, kuwedzera kwemigwagwa uye analytics inoparadza. Vane huwandu hwekukwira uye vanopedza nguva shoma pamapeji ewebhu. Musiyano chete pakati pebhuku idzi mbiri ndeyekuti Google bots vanoita chimwe chinhu chaibatsira, kuderedza deta kudzokera kunyoresa nzvimbo dzako, asi mabhora ekuvandudza anokonzera matanho ako emigwagwa kusvika pamwero wakawanda, kuisa mapurogiramu ako ehutano ari panjodzi. Nokudaro, zvakakosha kuziva mabhoti uye kuvadzivirira nekukurumidza. Iwe haufaniri kuita zvakawanda sezvo Google inopa zvakawanda zvezvirongwa uye zvishandiso kuita kuti basa rako rive nyore. Spammers inogona kudzivirira bots avo kwechinguva, asi kuvhara parutivi rwako kunofanira kuva nekusingaperi kwemigumisiro yakanaka.
Kuvhara Bhutiro Bhuti Risina Kudiwa
Unogona kubvisa zvisingabvumirwi bhoti yekutengesa ne .htaccess mafaira. Kana iwe ukavhara mabhoti mune aya mafaira, iwe unogona kuvandudza kushanda kwebasa rako rewebhu. Kushandisa nzira iyi, unogona kungodzivisa bhoti inogona kuonekwa uye inozivikanwa sevheji yepamberi. Kana mabhoti ezvizviona sevashandisi vepamutemo, iwe zviri nani kuvhura ma IP aderesi pakarepo. Iwe haugoni kuvhura mabhoti ose kusvikira waona ma IP aderesi uye kugadzirisa zvirongwa mu web host yako.
Imwe nzira inodzivirira bots kushandisa yako .htaccess mafaira. Zvinonyanya kukosha kuti iwe uvhare sevhisi dzakawanda dzeP IP sezvinobvira, kana kuti chengetedza ma kero e IP asina kuchengeteka neanochengeteka. Kana iwe uri WordPress user, iwe unofanirwa kutora zvakaipa bot traffic sezvo ichi ndicho chikwata apo vanokuvadza vachirwisa mafaira mune nhamba huru. Iwe unogona kuchinja yako .htaccess file, uye uise zviratidzo zvakasiyana kuti ugare wakachengeteka paIndaneti Source .